🥇एक वर्ग मा सबै भन्दा राम्रो सहज
हामी सबै शिक्षकहरूसँग बोरिंग कक्षामा छौं जुन विद्यार्थीहरूलाई निद्रामा पार्छन्। हामीसँग ब्यूँझिने त्यस्तो व्यक्तिहरू भए राम्रो हुन्थ्यो।
यस्तो सहपाठीसँग ध्यान केन्द्रित गर्न असम्भव। नोटहरू लिनको लागि यो भर्खरको फेसन हो।
एक विवाह को लागी एक क्लास अवरोध गर्न के राम्रो तरिका। यसरी कसरी कक्षाको अन्त्य भयो, ठूलो तालीका साथ।
के कसैले झोला चोरेको छ? चिन्ता नलिनुहोस्, फक्स केही मारियासिसको संगीतमा कार्यमा जान्छ।
पुस्तकालयहरू शान्ति र एकाग्रताको ठाउँ हुन्छन्। तर यी सबै समाप्त हुन्छ जब Pacman "waka waka" मा प्रवेश गर्दछ।
त्यसैले कोही पनि कक्षा मा भाग लिन्छ। संगीत सुरु हुन्छ र ब्ल्याकबोर्डहरू तिनीहरूको कोरियोग्राफीबाट सुरू हुन्छ।
एक राम्रो पावर रेंजर नृत्यको साथ धेरै बोरि classes वर्गहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्: अर्थशास्त्र, अपराध, भूगोल ...
स्टार वार्सको लागि लडाई
विद्यार्थी बल प्रयोग गरेर खुसी। डार्थ वाडरसँग जेदीको युद्ध!
यहाँ वरिपरिका साना चराहरू
यो विमान हो? के यो चरा हो? No! यो एउटा कुखुरा हो जसले एक शर्त हरायो र साना चराहरूको गीत नाच्न थाल्छ। प्रोफेसर रिसाउँछन्, र उनी प्लेटेड नभएसम्म उसको पछि लाग्ने निर्णय गर्छन्।
यदि तपाइँ एलियनहरूको समूह कक्षामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई ग्याँसहरू फाँस्नुहुन्छ र ती मध्ये एउटा लिनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक छ, के यस्तो हुन्छ जस्तो यस प्रकारको बीजगणितमा हुन्छ
एक मारियो कार्ट दौड
ध्यान केन्द्रित गर्न सम्भव छ यदि एक मारियो कार्ट रेस तपाइँको कक्षामा प्रवेश गर्दछ, र कम यदि सबै चलिरहेको ब्याटम्यानको साथ समाप्त हुन्छ भने। सब भन्दा सामान्य कुरा यो हो कि शिक्षक आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा नपाई समाप्त हुन्छ ...
तपाईलाई के लाग्छ? के तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको बोरिंग कक्षामा प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ?
सबै भन्दा राम्रो फोटोबमब्स
पहिले र अहिले पल्पीहरूको फोटो
धेरै पैसा प्रविष्ट गर्ने खेलाडीहरू
मानव दृष्टिकोणमा जनावरहरू